(Faalo)Lacag Badan ayaa kubaxda Dagaalka lagula jiro IS. welina ma dhawa | BALIBUSLE.COM
« Dowlada Puntland oo ka niyo jabsan hirgelinta hiigsiga 2016 in uu suuro gal…
Dr.Cabdillaahi Aadan Ciise Toohe, oo loo magacaabay Wasiir ku-xigeenka… »
(BB) Waxaa ilaa iyo hadda aan laysku keenin inta ku baxday lacagta kaga qaybgaleen isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaallamaya jabhadda IS ee Ciraaq. inkastoo ay jiraan dowlado tiro yar ah oo sheegay qiimaha kaga baxay dagaalkaas. siyaasiyiinta reer galbeedka ee mucaaradka ah ayaa iyagu mararka qaar tilmaamo in laga maarki karay in la isticmaalo dagaal toos ah. walow aysan sheegin sida looga maarmi karo.
Ilaa toban weerar oo cirka ah ayaa lagu muddo 24 saacadood gudahood ah lagu duqeeyay jabhadda IS, lix weerar oo cirka ahna waxa lagu sameeyay dalka Suuriya.Dagaalka kooxdaas lagula jiro ayaa sii kordhaya xili aysan jirin cadeymo sheegaya in la wiiqay awoodooda. dowladaha waaeyn ayaa iyagu waxaa ay ku leeyihiin fariisimo ciidam khaliijka. taasi waxaa ay u sahlaysaa in ay xoogaa helaan Wax uun beeqaamin ah laakiinse wadamadda yar yar ee ka qayb galay dagaalkaas looga soo horjeedo ISIS ayaa iyagu durbo dareemay in ay ku baxayso lacag xowli ku socota,
waxaa kamid ah wadamadaas Denmark, Sidaas waxa muujiyay lifaaq ay wasaaradda gaashaandhigga oo soo galay gacanta wakaaladda wararka deenishka, Ritzau.
Rasaas 44 milyan ah
Dayuuradaha dagaalka deenishka ayaa halkaas loo diray 2dii oktoobar, waxana ay markii ugu horraysay cagodhigteen xarun militeri oo ku taal dalka Kuwait 14 cisho ka dib. Tan iyo markaas waxay sameeyeen 250 duullimaad iyo hawlgallo oo ku duqeeyeen goobaha cadawga 200 bam. Inkastoo khamiistii ay ciidamada deenishka u buuxsantay lix bilood, haddana warbixinta wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku sinnayd ilaa dabayaaqada bishii feberweri – shan bilood ka dib markii hawlgallada la bilaabay.
Xisaabxidhka ayaa markaas ahaa 213 milyan oo koron. Waxana ka mid ahaa 44 milyan oo koron oo ku baxay rasaasta dayuuraduhu isticmaalayaan.
marka waxaa laga fili karaa wadamada waa weyn in ay ku baxsheen dagaalkaas. sikastaba dagaalka ka jira dhinaca shaam iyo ciraaq ayaa ah mid ay ku xiran tahay in la soo afjaro in ay soo galaan dowladaha carbeed ee imika ku fekeraya in ay xasiliyaan wadanka Yaman.
kala soco wixii cusb